Sidee ayay noqon kartaa shaxda kooxda Liverpool ay caawa kala hortagayso Chelsea kulanka Final-ka UEFA Super Cup? – Gool FM
Sidee ayay noqon kartaa shaxda kooxda Liverpool ay caawa kala hortagayso Chelsea kulanka Final-ka UEFA Super Cup?
(Istanbul) 14 Agoosto 2019. Kooxaha reer England ee Chelsea iyo Liverpool ayaa ku wada ballansan dalka Turkiga caawa, halkaasoo ay ku wada dheeli doonaan Final-ka UEFA Super Cup.
Reds ayaa doonaysa in kulanka ka dhacaya Turkiga caawa ee Final-ka UEFA Super Cup gacanta ku dhigto koobkoodii ugu horreeyey ee xilli ciyaareedkan.
Kooxda Merseyside-ka ka dhisan ayaa ku guuldarreysatay inay hanato koobka FA Community Shield kaddib markii ay rigooreyaal kaga qaaday Manchester City, laakiin tababare Jurgen Klopp ayaa ku kalsoon kooxdiisa inay gacanta sare yeelan karaan kulankaan ay caawa wajahayaan naadiga ka dhisan horyaalka Premier League.
Liverpool ayaa guul weyn ku furtay xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League waxaana ay ciyaartii lagu daah rogay horyaalka Ingiriiska Jimcihii ay 4-1 kaga adkaadeen Norwich City, waxaana ay wajahayaan labo maalin kaddib Chelsea oo guuldarro kala soo kulantay Manchester United.
Haddaba shabakadda Sports Mole ayaa shaacisay sida ay noqon karto shaxda ay ku soo geli doonto kooxda ku guuleysatay Champions League ee Liverpool kulanka ay wajahayaan Chelsea.
Xiddiga ka maqnaanaya kooxda Reds waxa ay kala yihiin: Alisson (dhaawac kubka ah), Nathaniel Clyne (dhaawac jilibka ah).
SHAX isku dhaf ah oo laga sameeyay Liverpool vs Chelsea ka hor kulankooda Final-ka UEFA Super Cup… (Yaa ku leh xiddigaha ugu badan?)